Taariikhda Farah Garane Fatule – The Official Website Of Farah Garane
Taariikhda Farah Garane Fatule
Date: November 4, 2012Author: Farah Garane
Magaceygu waa Farah Garane waxaan kudhashey caasimada muqdisho ee dalkii soomaaliya sanadii 20 july 1992 dii iyadoo ay xiliyadaas kacurteen dagaalada sokeeye ee dalkii hareeyey illaa maantana kasii socda.
Waxaan isaga soo tagey dalkii anigoo kasoo cararaya dagaaladaas, Ayaa waxaan soogalay Dalka Ethiopia gaar ahaan Gobolka Godey ee ismaaamulka dowlad deegaanka soomaliyeed ee dalka ethiopia iyadoo aan halkaa kabilaabey waxbarashadeydii oo ay iigu horeysey dugsi Qur’aamka kariimka ah sanadii 1998 dii isla sanadii xigteyna ee 1999 kii waxaan kamid noqdey ardeyda wax kabarato dugsiga Hoose/Dhexe ee Ugaas mashkooke ee gobolka godey.
Nolosheyda ayaa waxey iigu bilaabantey mid aad uxiisa badan walloow aanan garanjirin nolosha dhabta ah iyo meesha ay sal saar lalaadahey.
Noloshayda ayaa waxey aheyd mid kudhisnayd Farxad, Xiiso aan dhamaad laheyn midaas oo wakhtiyada qaar aanan xataa garan jirin xiliga waagu uu dilaacey iyo xiliga ay cad ceedu dhacdey.
Waxaan halkaaa kasii wadey waxbarashadeydii iyadoo sanadkii 2006 dugsiga dhexe ee ugaas mashkooke iyadoo sanadii xigteyna aan usoo wareegey galaaska 7aad sandii 2007 isla sanadkaasna waxaan fursad uhelay in aan sanadkaas gudihiisa aan labada galaas aan wax uga barto, waxaana kunaaloonayay in ay iisuurto gashey mid kamid ah riyadeydii kowaad.
Waxaana natiijo fiican kasoo hoyey dugsiga hoose/dhexe ee ugaas mashkooke sanadaas anigoo isu diyaarinayey sidii aan ugu gudbi lahaa dugsiga sare ee gobolka godey (Godey Hight School) sanadii 2008 dii sanadii xigteyna ee 2009 kii aan uga gudbey galaaska 10 aad waxaana nootimid natiijadii galaaska 10aad ee aan uga gudbi lahaa galaaska 11aad ama parperotery ga.
Nasiib xumo waxaa isoo wajahdey in aan isaga soo taggo dalkii oo aan usoo kacatimey dalkan kenya.
Runtii kenya ma aanan islaheyn in aan laqabsan doono jawigeeda waxbarasho, iyo tan nololba,
Waxaana kula kulmey nolol adag taas oo ah mid qaxootinimo.
Runtii qaxootinimadu waa nolol aad u adag taas oo aan dhihi karo intii aan noolaa waa mid igu reebtey xasuus lama illaawaan ah waxaana isku dayey in aan halkaa kasii amba qaado waxbarashadeydii, lakiin ma aynan iisuurta galin maxaa yeelay markii aan tagey iskuulaadka ay hay’adu maamusho oo aan isku dayey in aan dib ugu noqdo waxbarashadii waxaa caqabad igu noqotey in la ii qaabili waayo sidii aan rajeynayey oo aheyd in aan Galaaska 11aad kasii amba qaado.
Nasiib xumo waxaan lakulmey in ay noqoto in aan primary dib ugu laabto, waxaan dadaal dheer ugaley sidii aan kor ugu qaadi lahaa aqoonteyda waxbarasho, balse nolosha oo aheyd mid adag ayaa iisaamixi weysay in aan sidaan rabo wax u hello.
Markii aan muddo 3 bilood ah dhiganayey dugsiga dhexe ayaa waxaan isku wadi waayey kadib waxaan bilaabey waxbarasho private ah waxaana halkaa kaga harey iskuulkii, anoo dhinacyo kale ufiirinaayey si aan horey ugu siisocdo.
Waxaana muddo 1 sano iyo bar gaga baxey koorsooyin (courso) Nasiib wanaag waxaan ka howlgaley o shaqo kabilaabey qaxootiga anoo hay’ad lasexiixdey contracte hay’adaas oo ah save the children.
Anigoo ujeedadeydu tahey in aan kumeel gaar ahaan uga sii gudbo.
Dhanka kale waxaan rajeynayaa bishaan gudaheeda in ay isoo gaarto ID ga ama kibandhaha dalkan kenya,
Waxaan haatan joogaa Nairobi, waa magaalo aad ay nolosheedu u adag tahey sidaas darteed waxaan udhabar adeygay sidii aan waxbarashadeyda aan horey ugu soconi lahaa.
Waxaana hada wax kabartaa jaamacad kutaal dalkan waana kufaraxsanahey mahad idilkeed waxey usugnaatey ALLIHII KONKAAN ASKUMEY ee maanta iisuurta galiyey in aan wax kaxasuusto taariikhdii aan kusoo naaloonayey waxaana idinku dhaafey,
Wabillaahi towfiiq wasalaam alaykum warahmatulahi wabarakatu.
Previous Previous post: QISO XANUUN BADAN
Next Next post: Qiso dhamaystiran oo kusaabsan Noloshaada Oo Idil 25 25 25=75